राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन ३ महिना भित्रै सक्छौँ : अछाम प्रशासन – सुदूर दर्पण
राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन ३ महिना भित्रै सक्छौँ : अछाम प्रशासन
by Sudur Darpan
कमला खत्री,पौष २६,अछाम-पहिलो चरणमा अछामका ३ वटा स्थानिय तहहमा सुरुवात गरीएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण संकलन अभियानले निरन्तरता पाएको छ । नेपाल सरकारले नागरीक हरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध हुन निति ल्याएपछि अछाम जिल्लामा यस अभियानको पनि सुरुवात गरीएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले जानकारी गराएको छ ।
यहि पौष २० गतेबाट सुरुवात गरीएको अभियानमा जिल्लाको मंगलसेन नगरपालिकामा पौष २५ गते सम्मको बिवरण अनुसार २ हजार ३ सय ३८ जनाको बिवरण दर्ता गरीएको जिल्ला प्रशासन कायालय अछामले जनाएको हो । बिवरण सँकलनका लागी मँगलसेन नगरपालिकामा २४ जना दर्ता अपरेटरहरु लाइ खटाइएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले जानकारुी दिनुभयो ।
नगरपालिकाका १४ वटै वडामा अहिले निरन्तर रुपमा बिवरण दर्ता कार्य भैरहेको पनि प्रशासनले जनाएको छ । यस्तै जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकामा पनि बिवरण दर्ताको कार्यलाई तिब्रता दिएको बताईएको छ । कमलजार नगरपालिकामा अहिले ७ जना दर्ता अपरेटरले दर्ता कायलाई अगाडी बढाईरहेको कलबजार नगरपालिकाले जनाएको छ ।
पौष २५ गते सम्मको बिवरण अनुसार कमलबजार नगरपालिकामा ७ सय ३८ जनाको बिवरण सँकलन गरीएको बताइएको छ । कमलबजार नगरपालिकामा केहि ढिलो गरी कार्यक्रम सुरु गरीएकाले थोरै सँख्यामा दर्ता भएको बताइएको छ । यस्तै जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका पनि यो अभियान तिब्र गतिमा अगाडी बढिरहेको छ ।
गाउँपालिकामा अहिले १३ जना दर्ता अपरेटरले काम गरीरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकामा २५ गते सम्मको बिवरण अनुसार १ हजार ४ सय ३१ जनाको बिवरण दर्ता गरीएको अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । अहिले सम्म जम्मा ४ हजार ५ सय ७ जनाको विवरण दर्ता भएको तथ्याँक जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले सार्वजनीक गरेको छ ।
यस अभियानमा स्थानिय तहहरुको पनि समन्वयकारी भुमिका प्रभाबकारी रहेको पनि उनको भनाई छ । अहिले औषतमा दैनिक ४० जनाको बिबरण दर्ताको काम भैरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अबको ३ महिनामा जिल्लाका सबै स्थानिय तहमा दर्ताको काम सम्पन्न हुने पनि उनले बताए । नागरीकहरु उत्साहित रुपमा सहभागीता जनाईरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
अछाम हिँडेको ट्रक दुर्घटना : चालकको मृत्यु
ताजा जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम स्वागतयोग्य : भट्टराई
के अब अछामले उपाध्याय जस्तो सिडियो पाउला त ?
भिरबाट खसेर ज्यान गयो
सुदूरपश्चिम सरकारले निशुल्क एमबिबिएस पढाउने
कुप्रथा हटाउन तथा पर्यटन प्रबद्धन गर्न चित्रकला प्रतियोगीताको आयोजना
अछाममा गुडिरहेको गाडीमा किन लाग्यो आगो ?
आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ : अगुवा कृषक रावल (अडियो)
अछाममा माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लाग्दा एकको मृत्यु : अर्का एकजना प्रहरी नियन्त्रणमा
आज वैशाख २७ गते शनिवार, हेर्नुहोस तपाइको आजको राशिफल
अछाममा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिलाई कोरोना पुष्टि
भिरबाट खसेर अछाममा एक जनाको मृत्यु
झोरो र टुकि बाल्ने अवस्था अन्त्य गर्दैछुँ : सांसद बोगटी
ओली तिर सोझिए साँसद बोगटी
© 2020 SurdurDarpan | Designed by Webpal | Developed by Amazed.